Haka kicin lamaantaada illaa aad ka weydiiso in uu gaaray gariirka galmada daawo muqaalka - Hablaha Media Network
Haka kicin lamaantaada illaa aad ka weydiiso in uu gaaray gariirka galmada daawo muqaalka
HMN:- Su’aal xaaskaaga qaabka ay jeceshahay in aad ugu sameeyso weerarka sariirta iyo goobaha ay ka kacsaneyso , sidoo kale haweeneyduna waa in ay iyana weydiisaa .
Talaabaada koowaad ee loo baahan yahay waxa ay tahay in labada lamaane ahaadaan kuwo ka fog daal iyo fikir si loo helo gariir macaan oo dhanka galmada ah .
In jirka ahaado mid fir-forcoon maxaa yeelay hadii jirka
daalan yahay lama helayo raaxo , ogaaw raaxadana waxa ugu macaan midda saqda dhexe .
Ka hor inta aan weerarka la qaadin waxaa muhiim ah in lagu bilaabo hadalo macaan oo jilicsan, baashaalin , dhuuqmo , farakacayaar si wadada loogu xaaro in la helo dareen kacsan.
Ragga ayaa looga digayaa in marka galmada dhamaado in ay dhabarka u jeediyaan xaaska , maxaa yeelay haweenka marka galmada dhamaato waxa ay u baahan yihiin hadalo macaan , dhunkasho xabad gilin waayo waa ay uga sii macaan badan tahay raaxadii galmada aheyd ee dhacday .
La Taliyaha Bulshada ee dhanka Nolosha -Runta-Caafimaadka Iyo Nolosha kama xishoono
Ku Xernow Sheekooyin Jaceyl,Akhbaar Cajiib ah,Dareenka Raaxada Sharciga ah,Muuqalo qosol leh Halkan ayaad ka helaysaa Mar waliba Insha Allaah.